Muxuu yahay xalka loo helay tuugada jabsada gawaarida baakinada la dhigto | Radio Himilo
Home / Habka-Nolosha / Muxuu yahay xalka loo helay tuugada jabsada gawaarida baakinada la dhigto
Posted by: Ahmed Haaddi December 28, 2021
Himilo – Wax lagu tilmaami karo oo kaliya mid ka mid ah hababka ka hortagga jabsiga baabuurta ee ugu maan-galsan, dadka ku nool deegaanka Bay oo ah gobol ku yaal Waqooyiga California ayaa kaga tagaya baabuurtooda baarkinka isaga oo ay albaabada danbe furan yihiin si loo niyad jabiyo tuugada imaan karta.
San Francisco iyo Oakland ayaa la arkayay koror aad u weyn oo ku yimid jabsiga baabuurta bilihii la soo dhaafay, waxaana lagu soo waramayaa in arrimuhu aad u xumaadeen oo dadku ay doorbidayan inay baabuurtooda u baneeyaan si ay u tusaan tuugta in aysan ku jirin wax u qalma in la xado.
Sida laga soo xigtay qaar badan oo ka mid ah idaacadaha maxaliga ah, tirada sii kordheysa ee dadka deegaanka ayaa bilaabay inay wax kasta oo qiimo leh kala baxaan baabuurtooda, oo ay furaan albaabbada, iyo in ay furnaadaan kuwa danbe marka ay ku jiraan ganacsigooda. Ugu yaraan, tuugadu maaha inay jabiyaan daaqada si ay u raadiyaan wax qiimo leh oo baabuurka la dhigtay.
“Ma jiraan wax baabuurkeyga ku jira, waxayna arki karaan inaysan jirin wax ay qaataan,” Parisa Hemmat, oo ah milkiile ganacsi oo ku yaal Oakland, ayaa u sheegtay Inside Edition, markii ay ka tagtay SUV iyada oo uu furan yahay albaabka danbe ee gaarigeeda.
NBC Bay Area ayaa ku warramaysa in jebinta baabuurta ee San Francisco ay sare u kacday ku dhawaad 200% tan iyo sannadkii hore, iyadoo ku dhawaad 74 dhacdo sucub oo gawaari la jebsado maalin kasta. Qaar ka mid ah milkiilayaasha baabuurta ayaa u leexday xeelado cusub oo ay daaqadaha ku qoraan “Fadlan isticmaal albaabbada,” ama “Fadlan ha jabin muraayadda!! Waxba kuma jiraan!!”
Inkastoo uu ka tagayo gaariga oo albaabada u xiran yihiin oo xitaa xaga danbe ay furan tahay marka la dhigto baakinka ayaa caan ka noqotay deegaanka Bay, haddana booliiska ayaa uga digaya darawalada gaadiidka sidaas.
“Waxay xadaan baytariyadaada, taayiradaada,” Taliye ku xigeenkii hore ee Booliska San Francisco Garret Tom ayaa u sheegay ABC 7. “Waxay geli karaan gudaha oo ay heli karaan meesha aad ku nooshahay. Waa martiqaad musiibo.” Ayuu raaciyay
Previous: Maxaad ka ogtahay 10 ciyaaryahan oo kubadda cagta ah oo isku dayay ciyaaro kale sida xeegada barafka ilaa WWE
Next: Wiil qaxooti ah oo xiddig ka noqday baraha xiriirka Bulshada